Col. Cabdullahi Yuusuf, Xuub Sireed iyo qaar ka tirsan la taliyeyaasha madaxweyne Dowladda federaalka ah oo ka wada hadlay sidii xerata Utaanga loogu furilayaa dadka ka barakacay Muqdisho iyo meelo kale iyo dagaallada Xamar oo ku sii fidaya goobo cusub. Ruunkinet 20/04/07
Warar ayaa ka soo baxaya dad ku dhowdhow madaxtooyada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee Villa Soomaaliya.
Warkan ayaa tibaaxaya in inta uusan madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ka ambo bixin magaalada Muqdisho uu shir xasaasi ah la galay la taliyeyaashiisa oo uu ka mid yahay Xuseen Xuubsireed oo tifatira ka ah shabakadda Idimaale.
Shirka mas'uuliyiintan ayaa la sheegay in looga wada hadlay sidii xerooyinka qaxootiga ee dalka Kenya loogu furi lahaa dadka ka barakacay magaalada Muqdisho iyo goobo kale.
Warka ayaa intaasi ku daraya in madaxweyne Cabdullahi Yuusuf loo xilsaaray in uu dowladda Kenya kala hadlo sidii dadka ka barakacay Muqdisho loogu furi lahaa xuduudda Soomaaliya ay la leedahay dalka Kenya si ay u galaan xerooyinka qoxootiga ee ku yaal Kenya oo ay ka mid tahay xerada Utaanga.
Xuubsireed oo sida la sheegay mar ku jiray xerada Utaanga xillayadii dagaallada sokeeye ee ka dambeysay 90kii ayaa la sheegay in uu asagu lahaa fikirkan dadka ka barakacay Muqdisho loo geyn lahaa xerooyinkaasi.
Xuseen Xuubsireed oo inta badan lagu sheego in uu yahay shaqsi aad u doonaya in uu aarsado ayaa haatan ka mid ah mas'uuliyiinta ugu awoodda badan ee dowladda federaalka ah inkastoo lagu ilaaliyo hotelka uu ku jiro.
Dhanka kale, dagaallada ka jira magaalada Muqdisho ayaa sii xoogeysanaya.
Dagaalladan oo ay ku dhinteen dad badan oo rayid iyo ciidan isugu jira ayaa ku sii fidaya goobo horay u deggenaa ayadoo ay dad badan ka qexeen magaalada Muqdisho.